Ruhr University Bochum - Tacliinta Sare Abroad in Europe
gaabinta : xoqin
aasaasay : 1962
Ardayda (qiyaastii.) : 43000
Ha iloobin in aad wada hadlaan Ruhr University Bochum
Qorto Ruhr University Bochum
Ruhr University Bochum , ku taalla buuraha koonfureed ee aagga dhexe Ruhr Bochum, waxaa la aasaasay bishii 1962 sida jaamacadaha ugu horeysay cusub oo dadweynaha ee Germany tan iyo dagaalkii labaad ee dunida. Waxbarashada bilaabay in 1965.
The Bochum Ruhr-University waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu waaweyn ee Germany iyo qayb ka mid ah Forschungsgemeinschaft Deutsche ah, ururka maalgelinta cilmi German ugu muhiimsan.
Xoqin waxa uu ahaa mid aad loogu guulaystay in Initiative Excellence ee Federaalka Jarmal iyo Dowladaha State (2007), tartan u dhexeeya jaamacadaha ugu qiimaha Germany ee. Waxay ahayd mid ka mid ah hay'adaha yar baa ka hadhay tartamaya horyaalka ah “jaamacadda aqoonyahanada”, laakiin ma uusan ku guulaysan in wareega ugu dambeeya ee tartanka. Waxaa hadda jira sagaal jaamacadood ee Germany in ay qabtaan horyaalka this.
The University of Bochum ahaa mid ka mid ah jaamacadaha ugu horeysay ee Germany inay soo bandhigto darajo bachelor iyo sayidkaaga caalamiga ah, kaas oo bedelay Diplom dhaqanka Jarmal iyo Magister. Marka laga reebo xoogaa kiisaska gaarka ah (tusaale ahaan in Law) degrees, kuwaas oo loo bixiyo sida oo dhan Caqlina University Ruhr ah. Currently, Jaamacadda waxay bixisaa wadar ahaan 184 barnaamijyo kala duwan oo waxbarasho ka dhan beeraha tacliinta wakiil jaamacadda.
Waxay ku taallaa ku dhex firfircoon ah, goobta soo dhawayn iyo nawaaxigeeda ee Ruhr ah, Oo waxay wadnaha ka Europe, ka Ruhr-Universität Bochum (xoqin) iyadoo ay 20 Caqlina, unugyada hay'adaha anshax xoqin ee, hoy u tahay 5,600 shaqaalaha iyo ka badan 41,000 ardayda ka 130 dalalka. Dhammaan ka nidaamo sayniska weyn ka mideysan yihiin oo ku saabsan mid ka mid campus is haysta.
Xoqin waa ay ku si ay u noqoto mid ka mid ah jaamacadaha Yurub ee Qarniga 21aad taasoo keentay. Ku dhawaad ​​dhammaan koorsooyinka loo bixiyo sida barnaamijyada degree Master Bachelor iyo. barnaamijyada Our heer sare isu magaca caalami ah lagu sameeyo: Xoqin School Research sida jaamacad caalami ah cilmi habaysan phD ee cilmiga nolosha, cilmiga dabiiciga ah, injineernimada, ee aadamaha iyo cilmiga bulshada; Kooxda reer Excellence RESOLV (Ruhr baadhayaa Solvation); interfaculty iyo Departments Research maadooyinka, oo wadajir yihiin, umadeed iyo kuwa caalamiga shebekadaha, afaysto profile ee salaax ah. Added in tani ay tahay barnaamij unsurpassed waayo, waxay u dallici Early Career Cilmi, iyo kaabayaasha heer sare ah.
Maxaa ka dhigay waxa oo dhan nool yimaado waa dadka la kulmi on campus ay u harraadsan, aqoonta, ay cajiib, iyo ka go'an. Waxay kaa caawin qaabeeyaan salaax ah oo maskax furan-ka dhigaysa xoqin meesha soo jiidasho u leh dad ka adduunka oo dhan.
Kuliyada Falsafadda iyo Research Waxbarashada
Kuliyada East Studies Asian
Kulliyadda Engineering Environmental Madaniga iyo
Kulliyadda Engineering Farsamada
Kuliyada Electrical Engineering iyo Technology Information
Kuliyada Physics iyo xiddigaha
Kuliyada Chemistry iyo Kiimikada noole
Kulliyadda Biology iyo bayotechnoolajiyadda
Ma rabtaa wada hadlaan Ruhr University Bochum ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Photos: Ruhr University Bochum rasmiga ah Facebook
dib u eegista Ruhr University Bochum
Ku biir si ay ugala hadlaan reer Ruhr University Bochum.
University of Technical Berlin Berlin